Tag: telepresence | Martech Zone
Wednesday, April 25, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, isu taive nemusangano nevamwe vebhodhi kuCisco kuburikidza neTelepresence uye zvaive zvisina kushomeka. Kutaura kune mumwe munhu izere-saizi uye kumeso-kumeso kune kwakakosha kukosha. Ivo vanhu veCisco vanobvumirana uye vakaisa iyi infographic pasimba remasangano-emunhu. Zvinodikanwa zvemusika wakaparadzirwa wepasirese zvakashandura nzira iyo masangano anotaurirana nevavanoshanda navo, vatengesi / vadyidzani, uye vatengi vanogona kupatsanurwa nekureba
Wednesday, May 7, 2008 Chitatu, October 29, 2014 Douglas Karr
Chikwata changu cheshamwari dzakanaka, Jason, Bill, Carla neni takachaira takananga kuCincinnati nezuro kumusangano wekupedzisira weI-Mubayiro neCisco. Nzvimbo yeKarmeri iri padhuze asi Cisco yaida kutifambisa kuti tikwanise timu yavo izere neInnovation kuti ivepo Mafainari! Nedzinopfuura zana nemazana zana ekupinda kumakwikwi, takasarudzwa uye takaitwa makumi maviri nemaviri semi fainari. Zvino isu tanga tiri imwe yekupedzisira gumi nemaviri pfungwa dzichipa pamberi pe
China, April 17, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zuva racho rakagadzirirwa yedu yekupedzisira Cisco I-Prize mharidzo. Ini ndave kutotya. Isu takafunga kuti taizofanira kukwira kuenda kuChicago kana kupfuura kuCincinnati, asi takazoona nezuro manheru kuti kune nzvimbo yeTerepresence imo muKarimeri! Iyo tekinoroji inoshandisa yakakwira-tsananguro uye network yeCisco kutenderera vanoenda sekunge iwe wanga uri mukamuri imwechete. Misangano yeTerepresence ichaunza pamusoro pemabhiriyoni emadhora mumari yeCisco!